UkuThimba ngeBlog: KukuFunda ixesha lokuBuyisa! | Martech Zone
NgoLwesine, Julayi 5, 2007 Lwesine, Okthobha 23, 2014 Douglas Karr
Masingachithi xesha lethu omnye nomnye! Ndifuna ukunceda ibhlog yakho okanye iwebhusayithi ngokukhawuleza nangokufanelekileyo kwaye uya kufumana ikhonkco lothando kwibhlog yam.
Oko kukhankanywa kuya kuqhuba ukugcwala kunye nokunceda ngenqanaba lakho kwiTechnorati nakwiinjini zokukhangela. Ukuze ndenze oko, kuya kufuneka ndichwechwe kwibhlog yakho, kwaye tip it!
Uyifumana njani iBhlog yakho?
1. Chaza ibhlog yam kwindawo yakho.
2. Ndilahle umgca kumagqabaza ale posi ndinekhonkco kwiposti yakho.
Isithembiso sam: Ndiza kuchitha imizuzu embalwa ndijonga ubeko lwakho, ukusetyenziswa kwayo, seo, kunye nezithuba zakho zamva nje ukufumana into eya kuthi incede iwebhusayithi yakho okanye ibhlog. Ndiza kwenza iinzame zokwenza i-tip ibonakale kuyo yonke ibhlog okanye iwebhusayithi kunokuba ndizame ukukhupha kunye nokudibanisa 'iibhloko' ezininzi.
Yiyo leyo! Masifike Ukunikezela ngeblog!
Zive ukhululekile ukudlulisa eli khonkco nakubani na ongathanda ukumfumana.
tags: ukubhloga ibhlogukuhlawula umfundi
Andizukuwala lo mnikelo mhle.
Jul 6, 2007 ngo-6: 12 AM
Jul 6, 2007 ngo-1: 52 AM
Hei Doug, ndithumele ikhonkco kwibhlog yakho kwi:
Unebhlog enkulu kwaye ndifunda okuninzi kuyo.
Jul 6, 2007 ngo-9: 47 AM
Kude kube nini esi sibonelelo sisebenza? Ndinomsebenzi wasendlwini ekufuneka ndiwenzile (hayi, andizukuzama ukwenza umsebenzi omtsha nge 'blog' kuyo ukuchaza ukucoca endimele ndikwenze kumxholo wam :).
Jul 6, 2007 ngo-11: 24 AM
Nangaliphi na ixesha, Pat!
Jul 6, 2007 ngo-11: 52 AM
Ilungele ukunqunyanyiswa 🙂
Kudala ndifuna ukukucela ukuba ubuyekeze ibhlog yam ngamanye amaxesha ngoku, kwaye andinakukudlulisa oku! http://www.srcoley.com/2007/07/06/going-hoofs-up/
IBhlog kufuneka ibhalwe ngesiNgesi? Enkosi
Ndingathanda ukubonelela ngeengcebiso kwibhlog engeyiyo yesiNgesi. Kuvakala ngathi ngumceli mngeni omkhulu. Andizukuwugweba umxholo, ewe, kodwa ndingathanda ukujonga ubeko, ulwakhiwo, i-SEO, njl.
Jul 7, 2007 ngo-6: 26 AM
Jul 7, 2007 ngo-7: 11 AM
Molo kwakhona! Enkosi ngempendulo!
UDoug- nokuba uyajikeleza okanye awujikelezi uHamelife- enkosi ngesi sipho sikhulu.
Ndidibanise kuwe kwiposti yam yakutshanje: Oh yam! Amantombazana eBennet akwiKhonkco leVeki.
Naliphi na iingcebiso ziya kwamkelwa ngombulelo.
Ndongeze ikhonkco kwindawo yakho kwi-blogroll yam, ebekwe ezantsi kwicala lasekunene lewebhu yam.
Jul 8, 2007 ngo-4: 25 AM
Hmm, ngokusekwe ekuphumeni, ndiyathemba ukuba unezinto ezimbalwa ezenziwa nguDoug ezingqengqileyo 🙂
Jul 8, 2007 ngo-11: 09 AM
Kufanelekile umsebenzi! Into ehlekisayo kukuba xa ndiqala, bendifuna ukwenza ingcebiso enye ngebhlog nganye - kodwa andinakuzinceda ndakuba ndiqalile!
Inqaku liza kuthumela ngolwesiHlanu… Enkosi!
Jul 9, 2007 ngo-8: 39 AM
Ndingathanda ukukusa ngesithembiso sakho. Isithuba esalatha kwibhlog yakho sikwi:
Kwaye ibhlog yam ndingathanda ukuba undinike i-URL. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, thumela i-imeyile, kwaye ndiyabulela kuwe.
Jul 9, 2007 ngo-9: 51 AM
Esi sisibonelelo esihle kakhulu uDouglas. Enkosi ngokwabelana ngobulumko bakho. Nantsi iposti yam yebhlog. Ndikufumene nangona ndibhalisile kwibhlog yoMmangaliso weDawud. Luxolo.
Jul 9, 2007 ngo-10: 33 AM
Ndiyayithanda le nto, Doug! Ukuphumelela ngokuphumelela- kuyahambelana nomoya wokubhloga kakuhle. 🙂
Jul 11, 2007 ngo-8: 31 AM
Olu nyuselo olumangalisayo. Ndizama ukuqonda ukuba ndingayenza njani into efanayo kubafundi bam!
Nantsi iposti yam.
Ukuthengisa iqanda iBhlog yoShishino oluNcinci
Umbono omkhulu wentengiso uDoug. Ukuba unemizuzu embalwa yokujonga kwakhona indawo yam, ubulumko bakho buya kuthakazelelwa kakhulu.
Jul 13, 2007 ngo-2: 07 AM
UDoug uye waxhamla http://netglobalbooks.com/blog/
Naliphi na iingcebiso okanye iingcebiso zixatyiswa kakhulu.
Ndiza kubuya ndizokufumana iingcebiso ezilungileyo kunye nemfundo kwibhlog yakho.
Jul 13, 2007 ngo-7: 32 AM
Molo mfo wam, licebo elingakanani elo!
Jul 13, 2007 ngo-8: 06 AM
UDoug-andinakukwazi ukuzichasa ekufundeni kwinkosi uqobo
Nantsi iposti yam
Ndingathanda iingcinga zakho malunga nendlela yokuhlawulisa kakhulu ibhlog yam
Unombono wokukujonga kwaye ufumane "I-BLOG ikhutshiwe" kwenye yeebhlogi zam zefav, "Amacebo eWebhu kaJeremiya.".
Nceda Nceda oh Nceda undinike incam kwiBlog yam! Uninzi lwangaphambili lokubulela kuwe!
Le yindawo yam yebhlog, nceda uyihlolisise.
Jul 17, 2007 ngo-2: 47 AM
Umnikelo omnandi. Ndingalusebenzisa ngokwenene uncedo!
Doug hi, sele ndenze iposti ndikhankanya ukuthanda kwakho okuhle ukusinceda
Nalu ikhonkco, thanx 🙂
Ndingathanda ukusebenzisa ubulumko bakho…
Jul 20, 2007 ngo-7: 50 AM
Ukuba usenamandla okushiyeka, "ndingathanda ukuba ungajonga kwiQhawe le-PPC.
Ukufakwa kweBlog: Into elandelayo enkulu
Iposi licwangciselwe uMvulo kusasa:
Ndijonge nantoni na ekufuneka undiphose ngayo-itemplate, ubeko, i-SEO-nantoni na nayo yonke into. Ndijonge ukwenza ngaphezulu kwaye ndifuna ukwazi ukuba yintoni esebenzayo nengasebenziyo.
Jul 23, 2007 ngo-7: 59 AM
Kubonakala ngathi le nto yokuthimba izokugcina uxakeke kakhulu. Nantsi iposti yam enekhonkco lakho:
I-B2B IT kunye neMithombo yeendaba yeNtlalo 2: Umbono wabathengisi
Enkosi, kwaye amathamsanqa!
Andikwazi ukudlulisa oku kulungileyo kwesithembiso.
Agasti 1, 2007 ngo-3: 02 PM
UDoug-nantsi ikhonkco kwibhlog yam kwi uluntu oluqhutywa lilungu kubahlalutyi beshishini kunye nokusebenziseka kweengcali .. Ndinomdla kwindlela yokwenza ubulungu kuluntu kunye nokugcina abantu bebuya. I-BTW, "ndihlawule kwangaphambili" uhambo oluya kutyelelo lwakho olulandelayo ukondla isiyobisi sakho se-caffeine e-Starbucks!
Ndongeza nebhlog yakho kwigumbi lethu lokutyisa elikulo http://www.mycatalyze.org/Blogs/CatalyzeBlogsFeedRoom/tabid/1301/Default.aspx.
Enkosi ngeengcebiso esele ndizikhethile kudliwanondlebe lwakho noPaul Dunay.
Oktobha 1, 2007 ngo-4: 40 PM
UDoug-ucinga nje ukuba uza kufika nini ukuze uthabathe ibhlog yam? Ndongeze ibhlog yam kuluhlu lwakho olusalindelweyo nge-8/1 kwaye ngoku iyi-10/1 -dibanisa ukuba sele ndikuthengele i-Starbucks.
Ibhlog - isihloko = "Ubulumko baNgoku"
Agasti 2, 2007 kwi-8: 11 AM
Molo Doug; Andiqinisekanga ukuba ndiyenzile le nto. Nantsi ukubhloga kwam kule nyanga. Ndizifinyezile ii-blogtips zam ezantsi ukuqala kwam ukuqala; Kwaye baye bakhankanya ngakumbi enye ibhlog emva koko babanika iingcebiso. Ndingaba nomdla nakuziphi na iingcebiso onokuthi undinike zona.
Agasti 10, 2007 kwi-5: 50 AM
Kukho uthotho lwezithuba malunga neemetrikhi zentengiso yentlalo. Ndisebenzise iposti yakho apha njengomzekelo olungileyo wokunyusa inqanaba lomntu weTechnorati. Ndiqinisekile ukuba uyancuma, jonga apha:
Ngamanye amaxesha intsholongwane ngokuqinisekileyo kodwa mhlawumbi ayisiyiyo ikholaji- lishishini nje 😉